Izibani zezinhlamvu ezishintsha imibala zikhanyisa amagama owathandayo omcimbi okhethekile, umcimbi, uKhisimusi, iphathi, iholide, imibukiso noma ukuhlobisa ikhaya. Futhi kuyisipho esihle sezingane zakho, abangane nemindeni.
Khanyisa amagama akho owathandayo kumcimbi okhethekile, umcimbi, noma ukuhlobisa ikhaya.
Izincwadi nezinhlamvu ezingama-27 zezibani ze-alfabhethi ze-LED, njengokuhlanganiswa okungaqondakali ku-I LOVE U, HOME, MARRY ME, U&M, JOY njll.
Amalambu ethu akhanyisiwe anezinto eziningi eziguquguqukayo futhi aphathekayo njengoba enesisindo esingama-intshi angu-8.66 ubude, amasentimitha angu-1.77 ubukhulu, angaphanyekwa ezindongeni futhi azothatha amabhethri ama-2x AA ukuze angabi mkhulu ngokweqile futhi ngeke adinge ukuxhunywa esitolo sikagesi.
Imfashini yemibhalo engezansi ye-LED, impilo yesibani emide ye-LED, ukusetshenziswa kwesikhathi eside akusishisi. uthole umphumela omuhle kakhulu wokuhlobisa
Lezi zinhlamvu ze-LED Backlit zikulungele ukuhlobisa, ukukhangisa njll.
Yamukela ukwenza ngokwezifiso, okuqukethwe okuhlukahlukene, ubujamo, osayizi bokukhetha kwakho
Isitayela Isibani sangaphambili se-LED esikhanyisa incwadi yesiteshi
Izinto insimbi engagqwali
Usayizi nombala Isiphetho se-OEM ne-ODM esenziwe ngokwezifiso.
Umthombo Wokukhanyisa Amachipsi ahola i-LBY brand (anamahora angaphezu kuka-50,000 wokusebenza)
Inguquko I-Meanwell brand transformer, Ukufaka: AC 110-240V Umphumela: DC 12V
Ukufaka 1: 1 umdwebo wokufakwa nezikulufo.
Izesekeli Transformer, ukufakwa umdwebo nezikulufo.
Ihlukaniswe kunguqulo evamile efudumele emhlophe, lokhu kukhanya okuthuthukisiwe kwelemetshi kungashintsha imibala engu-16 enikeza izinketho eziningi zokukhetha umbala. Thola eyodwa ukwenza umgubho wakho ubalabala.
Isilawuli kude Esisha
Ngenguqulo yakudala yesilawuli kude, ungakwazi ukulawula i-On / Off nesikhathi, kepha nge-remote yethu entsha, ungakhetha umbala wokukhanya owufunayo ngezindlela ezi-4 ezikhanyayo ezifana ne-FADE, JUMP, ASYN FADE, ASYN JUMP ngenketho . Into emangalisa kakhulu ukuthi ungakwazi ukulawula ngisho nejubane lokukhanya.
Hamba uyokhipha amalambu ukuhlobisa umhlaba wakho
Izinhlamvu zama-alfabhethi kanye nezimpawu zinikeza amathuba amaningi okwenza umlayezo. Pela noma iliphi igama noma ibinzana ngalezi zinhlamvu ezinhle zokukhanya zama-alfabhethi ezifana ne- "BAR" ku-rack yakho yewayini, "UTHANDO" emshadweni noma engeza ama-initials egumbini lezingane.
Light Ukuhlobisa i-Alphabet Light】 Ukukhanya kombala okushintsha amalambu kukhanyisa amagama akho owathandayo ngomcimbi okhethekile, umcimbi, uKhisimusi, iphathi, iholide, imibukiso noma ukuhlobisa ikhaya. Futhi kuyisipho esihle sezingane zakho, abangane nemindeni.